Abakhiqizi Bochungechunge lwamafulegi Amancane - Abahlinzeki be-China Mini Flags Series & Factory
I-Mini Tabletop beachflag ayisindi, ikhithi yehadiwe ihlanganisa izingxenye ezimbili ze-fiber pole kanye nesisekelo esisodwa sensimbi esikhwameni esincane esinoziphu, kulula ukuhamba ngaso, izimo ezi-3 ezidumile ezitholakalayo (ifulegi lezinsiba/ifulegi le-teardrop/ifulegi elingunxande).
Ifulegi lenkomishi yokumunca, isibambi sefulegi esinenkomishi yokumunca singanamathiselwa endaweni ebushelelezi njengengilazi/ithayela/insimbi.3 amajamo ahlukene (amafulege ezinsiba / amafulegi ezinyembezi / amafulegi awunxande) ayatholakala.Idizayini yozimele elungisekayo, ungaba ne-engeli elungile oyidingayo.I-Pivoting pole ivumela ifulegi ukuthi liphenduke nomoya.Ithuluzi lokuphromotha elifanelekile lezindawo zokuthengisa, izindawo zokudlela, imicimbi, inxanxathela yezitolo nokunye!
Isibhengezo esiqinile senkomishi yokuncela yakhelwe ukusetshenziswa okukhethekile okudinga amandla anamandla esidlo sakusihlwa ezindaweni ezibushelelezi njengengilazi namafasitela emoto.Ithuluzi elikhulu lokukhangisa kwangaphandle.Ihlolwa ngesivinini esifinyelela ku-120km/h emotweni ehambayo.
Isibhengezo Esiyisisekelo Samagnetic
Isibhengezo se-Magnetic base iyithuluzi elihle lokukhangisa elizosetshenziswa ezimotweni noma emashalofini ensimbi.Izimo ezi-3 ezihlukene (uphaphe/iconsi lezinyembezi/unxande) ezitholakalayo.Kunezingcezu ezine zikazibuthe ezinamandla ezinamathiselwe esisekelweni.Futhi iyaguquguquka i-engeli, ungaba ne-engeli efanele oyidingayo.
Isiqeshana sesibhengezo siyinketho yokudala yamaphromoshini futhi idonse ukunaka endaweni encane.I-clamp yepulasitiki esindayo ingakwazi ukunamathisela kalula epayipini/eshubhuni/ecingweni njll, izimo ezi-3 ezidumile (ifulegi lezinsiba /ifulegi lezinyembezi/ifulegi elingunxande) elitholakalayo.
Ifulegi lethu lewindi lemoto legunya lobunikazi, elibizwa nangokuthi amafulegi wokunamathisela, linamathela kalula kunoma iyiphi iwindi lemoto noma iloli, izimo ezi-3 ezidumile (ifulegi lezimpaphe /ifulegi le-teardrop / ifulegi likanxande) elitholakalayo.I-Pivoting pole ivumela ifulegi ukuthi liphenduke libe umoya, thola ukunakwa okwengeziwe kumlayezo wakho.Idizayini yesiqeshana sewindi eneziqephu ezimbili ivumela ifulegi nesigxobo ukuthi kususwe kalula ngaphandle kokugoqa iwindi.